06 May, 2019 | Posted By: staff reporter
Chiedza Tawuchira Mavangira is one of the most influential Zimbabwean social activists. Over the last year, many Zimbabweans have come to know and respect Chiedza Tawuchira Mavangira as a social activist and a businessperson. Chiedza has a passion for Zimbabwe, which she has displayed in her videos and discussion’s with other future leaders such as Acie Lumumba and Carole Nyakudya.
Chiedza has become a huge social media influencer and Zimbabwe’s top Social Media Group MvengeMvenge has a new Sherriff in Town. Chiedza will be contributing and sharing her knowledge and passion with thousands of Zimbabweans on MvengeMvenge. Below are videos of Chiedza touching on social and political issues affecting young Zimbabweans.